Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Debian - LinuxCapable
Wenezde, August 18, 2021 by Jọshụa James
Mepụta na Akaụntụ onye ọrụ na Debian
Tinye onye ọrụ ọhụrụ na otu Sudoers na Debian
Mgbe emechara echichi, Debian Ndị ọrụ ga-achọpụta n'oge na-adịghị anya na sudo iwu melite n'oge ntinye mbụ na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ dị ka Ubuntu anaghị arụ ọrụ na-awụ akpata oyi n'ahụ ndị ọrụ ọhụrụ ọhụrụ na Debian. Nke a bụ akụkụ maka ihe nchekwa n'ihi ọdịdị nke akaụntụ sudo nwere ikike nchekwa. Debian kwenyere na ị kwesịrị iji aka gị na-ahazi nke a iji mee ka sistemụ gị sie ike. Maka ndị na-amaghị ihe sudo bụ, iwu a na-enye gị ohere ịme mmemme na ikike nchekwa nke onye ọrụ ọzọ, nke bụ isi akaụntụ mgbọrọgwụ.
Ịtinye aha njirimara gị dị na ịgbakwunye onye ọ bụla ọzọ chọrọ ịnweta iwu ihe ùgwù bụ usoro kwụ ọtọ yana iwu ole na ole.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta tinye onye ọrụ na otu sudoers na sistemụ Debian ọ bụla.
OS akwadoro: Nnenna 11 Bullseye (Debian na-adịghị akwụ ụgwọ, Nnwale, 10 ma ọ bụ obere ga-arụkwa ọrụ)
Ọ bụrụ na i wepụrụ sudoers, ma ọ bụ na ọ na-efu, tinyegharịa ngwugwu ahụ na iwu dị n'okpuru:
Iji mepụta ndị ọrụ sudo ọhụrụ, ịkwesịrị ịbanye na akaụntụ mgbọrọgwụ Debian. Mgbe etinyere Debian na mbụ, nrụnye chọrọ ka ịtọọ paswọọdụ mgbọrọgwụ. Ị ga-achọ nke a ka ị gaa n'ihu:
Ka ịgbanwee na mgbọrọgwụ, jiri ihe ndị a iwu su:
Ọmụmaatụ nke ngwa ngwa:
Ozugbo emechara, pịnye Y ma pịa tinye igodo aga n'ihu.
Maka ntụaka n'ọdịnihu, a na-echekwa ozi gbasara ndị ọrụ ọhụrụ na ndị dị adị na faịlụ ahụ /etc/password.
A ga-akpali gị pịnye aha njirimara sudo ị na-eji yana paswọọdụ ya:
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ndị ọrụ na sistemụ arụmọrụ Debian gị wee tinye ikike sudo. N'ozuzu, nkuzi a kwesịrị ịrụ ọrụ maka sistemụ Debian niile ma akwadoro naanị inye ikike nye ndị ọrụ tụkwasịrị obi n'ihi na ha ga-enweta faịlụ nwere mmetụta na ohere nke sudo nyere.
Categories Debian Tags Sudoers Mail igodo